ठूलो संख्यामा विज्ञापन गर्ने तयारीमा लोकसेवा आयोग | Ratopati
personपत्रपत्रिकाबाट exploreकाठमाडौं access_timeजेठ २, २०७६ chat_bubble_outline0
काठमाडौं । स्थानीय तहमा रिक्त १३ हजारभन्दा बढी पदमा नयाँ कर्मचारी भर्ना खुलाउनेसम्बन्धी बाधा अड्काउ फुकाउ प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ ।
लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहमा रिक्त पदपूर्तिका लागि केही कानुनी समस्या परेकाले त्यस्तो कानुनी जटिलता फुकाइदिन परामर्शसहितको पत्र सरकारसमक्ष पठाएको हो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले लोकसेवाको सो प्रस्ताव बुधबार मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार सम्भवतः अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट लोकसेवाको बधा अड्काउ फुकाउ प्रस्ताव पारित हुनेछ र त्यसलगत्तै लोकसेवा आयोगले झनडै १३ हजार पदमा विज्ञापन गर्नेछ । लोकसेवा आयोगले ती पदमा भर्ना खुलाउनेसम्ब्न्धी गृहकार्यलाई तीव्र पारेको छ । राजधानी दैनिकमा खबर छापिएको छ।
‘किन लेख्ने मैले ? पैसा लिएर लेख्ने तपाईंको कारिन्दा हो ?’
नेता नेपालले भने : कांग्रेस र मधेशी दल पनि पार्टी हुन् र ?
५८ करोड भ्रष्टाचार प्रकरणमा फेरि बोले गणेश थापा
विगतप्रति पछुताउँछिन् मिया खलिफा, वयस्क उद्योगले अभावग्रस्त महिलालाई जालमा पार्ने आरोप